China Red R101 / Rose red R108 mveliso kunye nabenzi | IBaizan
Ukuqinisekisa umgangatho weemveliso, senza uhlolo olungqongqo lwezixhobo, ngokwemigangatho yelizwe lase China.
Emva kokuba ibhetshi nganye ifikile, malunga ne-500ml yesampulu iya kuthathwa yenze uvavanyo.
Uvavanyo lwe-2.Appearance: enemibala kunye neselubala, isisombululo sesampulu yamanzi, akukho kungcola
Emva kokuba isampulu ixutywe ngokulinganayo, ilayishwe kwityhubhu yombala, emva koko i-20 # kunye ne-30 # zilayishwe ngokulandelelana kwezinye iityhubhu zombala wombala. Emva koko, ifakwe kwisakhelo setyhubhu yemibala ngokulandelelana. Thatha isipili sokuthelekisa umbala kwaye ufunde inani lesampulu ekufutshane ne-chromaticity esemgangathweni
Indlela yovavanyo lomxholo wamanqatha emveliso yayiyikholamu ye-capillary ye-chromatography yegesi. Emva kokuba isixhobo sihlengahlengisiwe kwaye isiseko sizinzile, iisampulu zajongwa ngenaliti ye-microglass ukulinganisa indawo ephezulu yeqela ngalinye, eyabalwa ngokwefomula okanye iprosesa yedatha ye-chromatographic, kunye nexabiso lomxholo lafunyanwa ngokobungakanani bendawo yesiqhelo.
Linganisa i-ethanol kwibhotile engunxantathu kwaye ungeze i-3-4 yehla yesalathi se-phenolphthalein Isisombululo kwisisombululo se-NaOH kumbala opinki olinganisiweyo. Isisombululo se-NaOH sigqityiwe kwaye inani le-sodium hydroxide esetyenzisiweyo lirekhodwa.
Yongeza isampula kwibhetshi, ibekwe ngaphakathi kwe-180 ℃ + 2 oven yokumisa i-oveni, ubushushu obungapheliyo beeyure ezi-2. Thatha uyipholise kubushushu begumbi, emva koko uyibeke kwityhubhu enye engenambala. Beka i # 20 kunye # 30, ngokwahlukeneyo, kwezinye iiplagi zomlomo ezimbini zokugaya ezingenambala ezingenamibala. Bafake kwi-rack rack. Sebenzisa isipili ukuthelekisa umbala kwaye ufunde inani lesampulu ekufutshane ne-chromaticity esemgangathweni
Egqithileyo Umdaka ophakathi BK104 / Umdaka ophakathi BK103
Okulandelayo: Mthubi Y101 / Opaque mthubi Y102